Uhambo lweendaba: Ukubika kwiiNkundla
Ukumboza enye yeNkcazo yeNkqenkquthela kunye neNtshonkotha
Ngoko ufumene isibambiso ngokufihla ibali lepolisa elisisiseko, kwaye ngoku ufuna ukulandela ityala njengoko liqhuba indlela yalo kwinkqubo yobulungisa-mthetho .
Siyakwamkela kwisibetho senkundla!
Ukumboza inkundla ngenye yeembhozo ezinzima kunye nentsholongwane kuyo nayiphi na intsebenzo yeendaba, esisityebi somdlalo womntu. Inkundla, emva kwayo yonke into, ifana nesigaba apho abadlali-abasolwayo, amagqwetha, ijaji kunye nejaji-bonke banomsebenzi wabo wokudlala.
Kwaye, ngokuxhomekeka kobugwenxa bobugebengu obushushu, izigxobo zingakhuba kakhulu xa inkululeko yommangalelwa-okanye nokuba yinto yokuphila kwayo-ingxaki.
Apha, ke, amanye amanyathelo okumele awulandele xa ugqiba ukutyelela inkundla yakho yasekhaya ukuba uhlawule ityala.
Khetha i-Courthouse efanelekileyo yokutyelela
Kukho iinkundla zolawulo oluhlukeneyo kulo lonke ilizwe, ukusuka enkundleni encinane kunazo zonke inkundla ejongene neengxabano zetikiti ezithethwayo kwinkundla ephakamileyo yesizwe, iNkundla ephakamileyo yase-United States eWashington, DC
Kungaba nzima ukuba ufumane iinyawo zakho zimanzi ngokutyelela inkundla encinci yendawo, ngezinye iinkcukacha ebizwa ngokuba yinkundla kamasipala. Kodwa, kuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo, ezi nkundla ezincinci kakhulu zihlala zilinganiselwe. Kungenomdla ukubheka abantu bebhikisha kwiikiti zamathambo embalwa imizuzu, kodwa ekugqibeleni uya kufuna ukuqhubela phambili kwizinto ezinkulu.
Ngokuqhelekileyo indawo efanelekileyo yokuqala yiNkundla ePhakamileyo yeNtshona .
Le nkundla apho kukho izilingo zamacala obubi, okunye okubizwa ngokuba yi-felonies. Iinjongo eziphakamileyo zeNkundla ziphi na izilingo ezininzi ezivakalayo, kwaye apho iincwadana zentatheli ezininzi zinokwenza umsebenzi wazo. Utshintsho kukho enye kwisihlalo sokuhlala apho uhlala khona.
Emva kokuba ufumene inkundla ephakamileyo yelizwe kwindawo yakho, yenza uphando oluninzi njengoko unako.
Ngokomzekelo, ukuba kukho ityala elipapashwa kakhulu eliye lafakwa kwiimidiya zendawo, funda kuyo ngaphambi kokuba uhambe. qhelana nazo zonke izinto malunga necala - umtyholwa, ulwaphulaphulo-mthetho, amaxhoba, amagosa achaphazelekayo (kokubatshutshisa nokukhusela) kunye nejaji. Awukwazi ukukwazi kakhulu malunga necala.
Ukuba ungenayo imeko ethile engqondweni, tyelela i-ofisi yomabhalana wenkundla ukubona ukuba ziphi izilingo ezivakalayo ngosuku oceba ukutyelela (olu luhlu lwamatyala maxa wambi lubizwa ngokuba yidokethi.) Emva kokuba ugqibe Xa ufuna ukumboza, fumana amanqaku amanxulumene naloo tyala kumabhalana ngokusemandleni (unokufuneka ukhokhe iindleko zokufotela.)
Khumbula, inxalenye enhle ibali obhalayo iya kuba yimvelaphi yemvelaphi: ngubani, yintoni, phi, phi, nini, kutheni kwaye njani kwimeko. Ngoko ke ukuba unako ngaphambi kwexesha, udidekile oya kuba xa usenkundleni.
Ugqoke ngokufanelekileyo: I- t-shirts kunye nee jeans zinokuba zikhululekile, kodwa azihambisani nomsebenzi wobugcisa. Akufuneki ukuba ubonise kwi-suit-piece piece okanye iingubo zakho ezigqwesileyo, kodwa ugqoke uhlobo lweengubo eziza kuba zifanelekile, zithi, iofisi.
Ukushiya Iinqwelo Ekhaya: Uninzi lwezigqeba zinezitshixo zensimbi, ngoko ungenise nto enokumisa i-alamu. Njengomshicileli wencwadi yonke into oyifunayo yincwadi kunye neepenki ezimbalwa.
Inqaku malunga neekhamera neeRekhodi: Imithetho ingahluka ukusuka kummandla ukuya kummandla, kodwa ngokuqhelekileyo iyanqandeka kakhulu ngokuzisa iikhamera okanye iirekhodi kwinkundla yenkundla; khangela umabhalana wenkundla ngaphambi kokuya kubona ukuba imiphi iindawo ohlala kuyo.
Thatha amanqaku apheleleyo: Kungakhathaliseki ukuba kunjani ukubikwa kwecala ngaphambi kokulinga, amathuba okufumana iinkqubo zenkundla zidideka ekuqaleni. Ngoko thabatha kakuhle, uphawule ngokucacileyo, malunga nezinto ezingabonakali zibalulekile. Ukuze uqonde oko kuyenzeka, kuya kuba nzima kuwe ukuba ugwebe izinto ezibalulekileyo - kwaye kungenjalo.
Qaphela iMigqaliselo yezomthetho ongawaqondiyo: Umsebenzi wezomthetho uzaliswe ngegoggon - ngokomthetho - ukuba, inxalenye enkulu, kuphela abagwebi bayakuqonda.
Ngoko ukuba uva igama ongalwaziyo, phawula oko, jonga inkcazelo kwi-intanethi okanye kwi-encyclopedia esemthethweni xa ufika ekhaya. Musa ukuyihoxisa isigama nje ngokuba awuyiqondi.
Jonga Ngexesha leMidlalo yeMveli: Izilingo ezininzi zixesha elide lezinto ezithandekayo ezipakanyiswe ngamaxesha ambalwa entle. Umdlalo onjalo ungafika ngendlela yokukhupha kummangalelwa, ingxabano phakathi kommeli kunye nejaji okanye ibinzana ebusweni be-juror. Nangona kwenzeka, ezi zihlandlo ezimangalisayo ziza kubaluleka xa ubhala ubhala ibali lakho, ngoko uqaphele.
Ingaba Ukubika Ngaphandle I-Courtroom: Akwanele ukuba ubhale ngokuthembeka into eyenzekayo enkundleni. Intatheli enhle kufuneka yenze ingxelo eninzi ngaphandle kwenkundla. Uninzi lwezilingo luninzi luphelela emini; benzise abo bazama ukuthetha nodliwano-ndlebe namagqwetha kumacala omabini ukuba bafumane imvelaphi eninzi njengoko unako malunga naloo daba. Ukuba amagqwetha angeke athethe ngexesha lokuphumla, fumana ulwazi lwabo lokuqhagamshelana kwaye ucele ukuba unokubiza okanye u-imeyile emva kokuba ityala liphelelwe usuku.
AbaFrench abaQinisekisiweyo: Iimfuno ze-Adjectifs
Isikhokelo soThutho esisodwa
IsiHlomelo sesine: Umbhalo, iMvelaphi, kunye nenjongo
Ukudibanisa umtshato kwi-Islam